ကိုအ၀ှာနှင့် မအ၀ှာတို့သည် ရှေးဦးစွာ အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေများ ဖြစ်ကြပြီး . . . . .။
(ကာယကံရှင်တို့ ထိခိုက်နင့်နာမှု မရှိကြစေရန် နာမည်များ ပြောင်းလွှဲထား၏။ နာမည်လွှဲလိုက်မှ မဆိုင်သူများနှင့် တိုက်ဆိုင်နေလျှင် . . .။ ဖြစ်တတ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် လူရေးသောစာသည် လူ့အကြောင်းသာ ဖြစ်တတ်ရာ လူရေးသောစာကို လူစာတတ်သူက ဖတ်မိပြီး “ငါ့အကြောင်း ရေးထားတာပဲ . . . . .”ဟု . . . . .။ စာရေးသူ)
အဆိုပါ အ၀ှာတို့၏ ဆက်ဆံရေးသည် တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ရာသီ၌ သိုသိုသိပ်သိပ် သိပ်သိပ်သည်းသည်း ဖြစ်လာ၏။ အ၀ှာထီးနှင့် အ၀ှာမတို့ အားလပ်ရက် ရကြ၍ အားအားယားယား ချက်တင်းနှောကြသည်။ ဤသို့ . . . . .။ နောက်ဆုံး၌ မရည်ရွယ်ဘဲ (သို့မဟုတ်) ရည်ရွယ်ရင်းအတိုင်း ချစ်တင်းနှောသွားကြ၏။ (ကိုအ၀ှာသည် မြာပွေသူ ဖြစ်ပြီး မအ၀ှာသည် ရှာနေသူဖြစ်သည်ဟု ယူဆရ၏။ စာရေးသူ)
ဂျီတော့နှင့်ချက်။ ထွက်၍တစ်ခါ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ။ အာကလိအောက် အောက်ကလိအာ။ ဘာသာတူ လူမျိုးတူ။ ငြူစူကင်းစင်။ သွင်ပြင်ပုံပန်း နတ်နှယ်ဆန်း။ ငန်းငန်းတက် ဗီဇက်အို။ ငြိုငြင်ပြန်လျှင် ဖုန်းဆက်။ မက်ဆေ့ခ်ျ ပို့တန်ပို့။ သို့ကလို နေ့နှင့်ည။ မအ၀ှာနှင့် ကိုအ၀ှာ။
“ တွေ့ရအောင်။ မနက်ဖြန်လား။ သန်ဘက်ခါလား။ အခု ညတွင်းချင်းလား။ :) :) :)”
“:) မနက်ဖြန်ကျရင် အိမ်ကလူတွေ နှစ်သစ်ကူးပါတီ သွားကြမှာ။”
“:) :) :) လိပ်စာပြော။”
“. . . . . . . . . . Singapore 8 . 8 . 88 ”
ကိုအ၀ှာသည် အိမ်မက်ယာမက် ကောင်းစွာမက်၍ မနက်အစောကြီး နိုးလာ၏။ စောစောထ။ သွားတိုက်။ မျက်နှာသစ်။ အိပ်ယာသိမ်း။ ရေးချိုး။ . . . . . နေမွန်းမတည့်မီ မအ၀ှာ၏ နေအိမ်မင်္ဂလာသို့ ကြွမြန်းနိုင်လေ၏။ တစ်နာရီအတွင်း ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်သွားသည်။ နေရာမှန်သည်။ အလွတ်ကျက်ထားသည့် လိပ်စာကို ပြန်ကြည့်စရာပင် မလိုပေ။ တစ်ခုသာ မှားနေသည်။ မအ၀ှာ၏ နေအိမ်တံခါး သော့ခတ်၍ ပိတ်ထားသည်။ ကိုအ၀ှာ ဆုတ်ပြန်ရန်သာ ရှိတော့သည်။
“မနက်ဖြန်ကျရင် အိမ်ကလူတွေ နှစ်သစ်ကူးပါတီ သွားကြမှာ”
ပို့စ်ရေးသားသူ Ashin Acara. ရက်စွဲ Monday, January 30, 2012